Fariin Jaceyl Calaal Ah : Waxaad Gacanta Ku Haysaa Furaha Laga Xukumo Qalbigeyga:Qalinkii Fanax Fariid | Caalamka24.net
Fariin Jaceyl Calaal Ah : Waxaad Gacanta Ku Haysaa Furaha Laga Xukumo Qalbigeyga:Qalinkii Fanax Fariid
*Dhulka meesha aad uga nooshahay waan ka jeclahay dunida inteeda kale, waayo waxaan kaa dugaashadaa ruuxdaada,waqtiyada wey isbedelaan laakin jaceylkaaga weli waa sidiisii inuu sii kordha maahee waxba iskama dhimin weli.
*Maalmuhu waa mugdi hadii aadan ka muuqan agagaarkeyga oo aadan iigu deeqin dhoolacadeyntaada.
*Dareenka caashaq ee aan kuu qabo waa mid qoto dheer oo salka ku hayo aragtiyo isku gudbiyey fariin,qalbiyo anagoo aanan dareemin isla hadlay. Waan kaa helay ma’ahan keliya in muuqaalkaaga i deeqay ee waa in aanan nolosheyda kuu hibeeyey.
*Waxaad gacanta ku sidataa furaha laga xukumo qalbigeyga adiga ayaana u qalma inaan kugu aamino jaceylka aan baaxad laheyna,daajis.com, Daacadnimada iyo kalsoonida ayaa aasaas u ah hogaanka xiriirkasto waxaana kaa rajeyn doonaa inaad rumeyso riyada wadajirkeena.
Waxaan saadaaliyaa maalintii aan kulmi laheyn si kasto oo ay u fogtahay waan hubaa in nafteyda xamili doonto maalintaas xuska mudan. Ogowna waan ku jeclaan doonaa inta naftu aan qabo